Lyrica (လိုင်ရီကာ) : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
Lyrica (လိုင်ရီကာ) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Lyrica® သည် အတက်ကျဆေး တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဦးနှောက်ထဲရှိ တက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသော လှုံ့ဆော်မှုများကို နှေးစေသည်။ Lyrica® သည် အာရုံကြော စနစ်တစ်လျှောက် နာကျင်ခြင်း အချက်ပြမှု ပို့သော ဦးနှောက်ရှိ ဓါတု ပစ္စည်းများကို သက်ရောက်သည်။ Lyrica® ကို တက်ခြင်းကို ထိန်းရန် နှင့် ကြွက်သား၊ အဆစ်အမြစ်များ နာကျင် တောင့်တင်းခြင်းကို ကုသရန် သုံးသည်။ ဆီးချို သွေးချို လူနာ များတွင် အာရုံကြော ပျက်စီးခြင်း၊ ရေယုန်ကြောင့် နာကျင်ခြင်း တို့ကို ကုသရန်လည်း သုံးသည်။
Lyrica® ကို ဆေးလမ်းညွှန်တွင် ဖော်ပြမထားသော အခြား ရည်ရွယ်ချက်များ အတွက်လည်း သုံးနိုင်သည်။
Lyrica (လိုင်ရီကာ) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Lyrica® ကို ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း တိကျစွာ သောက်ပါ။ အကြံပြု ထောက်ခံထားသည်ထက် ပိုများစွာ၊ ပိုနည်းစွာ သို့မဟုတ် ပို၍ ကြာရှည်စွာ မသောက်ပါနှင့်။ ဆေးစာ တွင် ပါသော လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာပါ။
Lyrica® ကို အစာဖြင့် သို့မဟုတ် အစာမပါဘဲ သောက်နိုင်သည်။
ဆေးရည်ကို ဆေးပမာဏ တိုင်းသော ဇွန်း သို့မဟုတ် ခွက်ဖြင့် တိုင်းပါ။ ပုံမှန် စားပွဲတင်ဇွန်းကို မသုံးပါနှင့်။ ဆေး ပမာဏ တိုင်းသော ခွက်မရှိပါက ဆေးရောင်းသူထံမှ တောင်းပါ။
ဆရာဝန်၏ အကြံပြုချက် မပါဘဲ Lyrica® ၏ ဆေးညွှန်းကို မပြောင်းပါနှင့်။ ဆေးသည် သင်၏ အခြေအနေကို ကုသရာတွင် အလုပ် ဖြစ်ပုံ မပေါ်ပါက ဆရာဝန်အား ပြောပါ။
Lyrica (လိုင်ရီကာ) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Lyrica® ကို အခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်အလင်း နှင့် စိုထိုင်းမှုတို့မှ ကင်းဝေးအောင် သိမ်းဆည်းရမည်။ ဆေးပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် Lyrica® ကို ရေချိုးခန်း သို့မဟုတ် ရေခဲ သေတ္တာတွင် မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။ Lyrica® တွင် မတူညီသော ကုန်တံဆိပ်များစွာရှိသည်။ တံဆိပ်ပေါ် မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းမှုပုံစံ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သိမ်းဆည်းမှုနှင့် ပတ်သက်သော ညွှန်ကြားချက်များအတွက် ဆေး၏ ဘူးကို အမြဲစစ်ရန် အရေး ကြီးသည်။ သို့မဟုတ် ဆေးရောင်းသူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။ ဆေးများအားလုံးကို ကလေးနှင့် အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်များမှ ဝေးရာနေရာတွင် ထားပါ။
ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိဘဲ Lyrica® ကို အိမ်သာထဲ ထည့်ခြင်း၊ ရေဆင်းပိုက်ထဲ ထည့်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ သက်တမ်းကုန်သွားပါက သို့မဟုတ် မလိုအပ်တော့ပါက ထိုထုတ်ကုန်ကို သင့်တော်စွာ စွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးသည်။ ထုတ်ကုန်ကို ဘေးကင်းစွာ စွန့်ပစ်နိုင်ရန် ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Lyrica (လိုင်ရီကာ) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
သင်သည် Lyrica® သို့မဟုတ် အခြားဆေးများ၏ ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ပါက။
Lyrica® သောက်နေစဉ် မိမိကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံ လိုသော အတွေးများ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဆရာဝန်သည် သင့်ကို ပုံမှန် စစ်ဆေးရန် လိုသည်။ ဆရာဝန်နှင့် ချိန်းဆိုမှုများကို မပျက်ကွက် ပါနှင့်။
Lyrica® သောက်နေစဉ် မျက်စိအမြင်နှင့် ဆိုင်သော ပြဿနာများ ဖြစ်ပါက ဆရာဝန်အား ခေါ်ပါ။ တက်ခြင်း မဖြစ်အောင် Lyrica® သောက်နေပါက သက်သာလာ သော်လည်း ဆက်သောက်နေပါ။ Lyrica® ဖြတ်ပြီးနောက် တက်ခြင်း ပိုဖြစ်နိုင်သည်။ ဆရာဝန်၏ လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Lyrica (လိုင်ရီကာ) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
အမျိုးသမီးများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သို့မဟုတ် နို့တိုက်စဉ်တွင် Lyrica® သုံးလျှင်ရနိုင်သော အန္တရာယ်များကို ပြည့်စုံစွာ လေ့လာထားခြင်း မရှိပါ။ Lyrica® မသောက်မီ ဖြစ်နိုင်သော အကျိုး ကျေးဇူးနှင့် အန္တရာယ်ကို ချိန်ညှိရန် ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတိုင်ပင်ပါ။ Lyrica® သည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အစားအသောက် နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက် အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် C ရှိသည်။
Lyrica (လိုင်ရီကာ) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
မှတ်ညဏ် ပြဿနာများ၊ အာရုံစိုက်၍ မရခြင်း
Lyrica® သုံးနေစဉ် အောက်ပါ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်ပါက ဆရာဝန်အား ချက်ချင်းခေါ်ပါ။
ကြွက်သား နာကျင်ခြင်း၊ အားနည်းခြင်း ( အထူးသဖြင့် အဖျားတက်ပြီး မောပန်းနေသောအခါ)
အညိုမည်း စွဲလွယ်ခြင်း၊ သွေးထွက်လွယ်ခြင်း
လက် သို့မဟုတ် ခြေထောက်တွင် ရောင်ရမ်းခြင်း
လျင်မြန်စွာ ကိုယ် အလေးချိန်ကျခြင်း
ရောဂါ လက္ခဏာ အသစ်များ ပေါ်လာပါက သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာပါက ဆရာဝန်အား ပြောပါ။ ဥပမာ
စိတ်နေစိတ်ထား၊ အပြုအမူ ပြောင်းလဲခြင်း
အလွန်အမင်း တက်ကြွနေခြင်း ( ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ)
မိမိကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံလိုသော အတွေးများ ရှိခြင်း
Lyrica® နှင့် ဓါတ်မတည့်မှုသော လက္ခဏာများ ရှိပါက အရေးပေါ် ကျန်းမာရေး အကူအညီ ရယူပါ။ ဥပမာ အင်ပျဉ်၊ အသက်ရှူရ ခက်ခြင်း၊ မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ သို့မဟုတ် လည်ချောင်း ရောင်ခြင်း။
ဘယ်ဆေးတွေက Lyrica (လိုင်ရီကာ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Lyrica® သည် သင်လက်ရှိသောက်နေသော အခြားဆေးများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဆေး တုံ့ပြန်မှုများ ကို ရှောင်ရန် သင်အသုံးပြုနေသော ဆေးများ အားလုံးကို စာရင်းပြုပြီး ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်အား ပြပါ။ ဘေးကင်း စေရန် ဆရာဝန် သဘောတူမှုမပါဘဲ ဆေးပမာဏ ကို ပြောင်းခြင်း၊ ရပ်ခြင်း၊ စတင်ခြင်း မပြုပါနှင့်။
ဤဆေးနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်သော ဆေးများမှာ
Rosiglitazone (Avandia, Avandamet, Avandaryl)
နှလုံး သို့မဟုတ် သွေးပေါင်ချိန် ဆေး ဥပမာ benazepril (Lotensin), enalapril (Vasotec), lisinopril (Prinivil, Zestril), quinapril (Accupril), ramipril (Altace) နှင့် အခြား
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Lyrica (လိုင်ရီကာ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Lyrica® သည် အစာ သို့မဟုတ် အရက် နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေ သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဆေးမသောက်မီ အစာ သို့မဟုတ် အရက်နှင့် ဓါတ်ပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်သလားကို ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Lyrica (လိုင်ရီကာ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Lyrica® သည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေများနှင့် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထိုသက်ရောက်မှုသည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံ ပြောင်းသွားခြင်း ကိုဖြစ်စေနိုင် သည်။ သင့်တွင် လက်ရှိ ရှိနေသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အားလုံးကို ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါးပညာရှင်အား အသိပေးထား ရန် အရေးကြီးသည်။
ဤဆေးနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်သော ကျန်းမာရေး အခြေအနေ များမှာ
ဆီးချိုသွေးချို ( ဆီးချိုသွေးချို ကြောင့် ဖြစ်သော အာရုံကြော ပြဿနာကို ကုရန် Lyrica သောက်ခြင်း မဟုတ်ပါက)
ကျောက်ကပ် ရောဂါ ( သို့မဟုတ် ကျောက်ကပ် ဆေးနေရပါက)
သွေးထဲတွင် သွေးဥမွှား နည်းခြင်း
အရင်က စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း သို့မဟုတ် သေကြောင်းကြံ လိုသော အတွေးများ ရှိခြင်း
ဆေး သို့မဟုတ် အရက် စွဲခြင်း
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Lyrica (လိုင်ရီကာ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Diabetic Peripheral Neuropathy နှင့် ဆက်စပ်သော အာရုံကြော နာကျင်ခြင်း
အကြံပြုထောက်ခံ ထားသော အများဆုံး ပမာဏမှာ 100 mg တစ်နေ့ သုံးကြိမ် ( 300mg/day) ဖြစ်သည်။ creatinine clearance အနည်းဆုံး 60 mL/min ရှိသော လူနာများ အတွက် ဖြစ်သည်။
ဆေးပမာဏကို 50 mg တစ်နေ့ သုံးကြိမ် (150mg/day) ဖြင့် စတင်ပါ။
ခံနိုင်ရည် နှင့် အကျိုးသက်ရောက်ပုံ အပေါ် မူတည်ပြီး တစ်ပတ် အတွင်း ဆေးပမာဏကို 300mg/day အထိ တိုးနိုင်သည်။
အကြံပြုထောက်ခံ ထားသော ပမာဏမှာ 75 မှ 150 mg တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် 50 မှ 100 mg တစ်နေ့ သုံးကြိမ် ( 150 မှ 300mg/day) ဖြစ်သည်။ creatinine clearance အနည်းဆုံး 60 mL/min ရှိသော လူနာများ အတွက် ဖြစ်သည်။
ဆေးပမာဏကို 75 mg တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် 50 mg တစ်နေ့ သုံးကြိမ် (150mg/day) ဖြင့် စတင်ပါ။
တက်သော လူကြီးလူနာများ အတွက် တွဲဖက်ကုထုံး
Lyrica® ဆေးပမာဏ 150 မှ 600 mg/day ကို တက်ခြင်း၏ ကုသမှုတွင် တွဲဖက် ကုထုံးအဖြစ် သုံးနိုင်သည်။
Lyrica® ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု နှင့် ဆိုးကျိုးများသည် ဆေး ပမာဏနှင့် ဆက်စပ်သည်။ နေ့စဉ် ပေးရမည့် ပမာဏကို နှစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် သုံးကြိမ် ခွဲပြီး ပေးပါ။
ကြွက်သား၊ အဆစ်အမြစ်များ နာကျင်တောင့်တင်းခြင်း
အကြံပြုထောက်ခံ ထားသော ပမာဏမှာ 300 မှ 450 mg/day ဖြစ်သည်။ ဆေးပမာဏကို 75 mg တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် (150mg/day) ဖြင့် စတင်ပါ။
ခံနိုင်ရည် နှင့် အကျိုးသက်ရောက်ပုံ အပေါ် မူတည်ပြီး တစ်ပတ် အတွင်း ဆေးပမာဏကို 150 mg တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် (300mg/day) အထိ တိုးနိုင်သည်။ 300mg/day နှင့် မသက်သာသော လူနာများတွင် 225 mg တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် (450 mg/day) အထိ တိုးနိုင်သည်။
ကျောရိုးမ နာဗ်ကြိုး ဒဏ်ရာနှင့် ဆက်စပ်သော အာရုံကြော နာကျင်ခြင်း
အကြံပြုထောက်ခံ ထားသော ပမာဏမှာ 150-600 mg/day ဖြစ်သည်။
စတင်ပေးသော ပမာဏမှာ 75 mg တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် ( 150 mg/day) ဖြစ်သည်။
ခံနိုင်ရည် နှင့် အကျိုးသက်ရောက်ပုံ အပေါ် မူတည်ပြီး တစ်ပတ် အတွင်း ဆေးပမာဏကို 150 mg တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် (300mg/day) အထိ တိုးနိုင်သည်။ 150 mg တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် ဖြင့် 2-3 ပတ်ကြာ ကုသပြီးနောက် မသက်သာပါက 300 mg တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် အထိ တိုးပြီး ကုသနိုင်သည်။
ကလေးတွေအတွက် Lyrica (လိုင်ရီကာ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးလူနာ များအတွက် ဆေးညွှန်းမှာ အတိအကျ မရှိသေးပါ။ ကလေးများအတွက် စိတ်မချရပါ။ အသုံးမပြုခင် ဘေးကင်းမှုကို အပြည့်နားလည်ရန် အရေးကြီးသည်။ ပိုမိုသော အချက်အလက်များအတွက် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Lyrica (လိုင်ရီကာ) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Lyrica® (pregabalin) ကို အောက်ပါပုံစံ၊ ပြင်းအားများဖြင့် ရနိုင်ပါသည်။
ဆေးတောင့်၊ သောက်ဆေးရည် pregabalin 25 mg
Lyrica® သောက်ရန် မေ့သွားပါက တတ်နိုင် သလောက် မြန်မြန်ပြန် သောက်ပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သောက်ရန် အချိန်ရောက်သွားပါက မေ့သွားသော အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်သောက်ပါ။ နှစ်ကြိမ် ထပ်မသောက်ပါနှင့်။
Lyrica®. https://www.drugs.com/lyrica.html. Accessed July 12, 2017
Lyrica®. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-93965/lyrica-oral/details. Accessed July 12, 2017